एसिया कप छनोटः नेपाललाई चौथो झड्का, ज्ञानेन्द्र पनि आउट ! [अपडेट] - Everest Dainik - News from Nepal
एसिया कप छनोटः नेपाललाई चौथो झड्का, ज्ञानेन्द्र पनि आउट ! [अपडेट]
काठमाडौं, भदौ १९ । एसिया कप छनोट अन्तर्गत आफ्नो पाँचौ खेलमा नेपालले चौस्रो विकेट गुमाएको छ । चौथो विकेटको रुपमा उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आउट भएका छन् । उनले २६ बल खेलेर मात्र १२ रन बनाउन सके ।
यस्तै, तेस्रो विकेटका रुपमा अनिल शाह आउट भएका थिए । उनी ४२ बल खेलेर १५ रन बनाउदै आउट भए । यसअघि सुवास खकुरेल शून्य र कप्तान पारस खड्का १४ रनमा आउट भएका थिए । नेपालले १७ ओभरको खेल सकिदा महत्वपूर्ण ४ विकेट गुमाउँदै मात्र ४८ रन बनाएको छ ।
ट्याग्स: Gyanedra Malla, nepal vs. hongkong